Nhau - Dzidzisa iwe sei kubvisa chipikiri gel kupora kubva muzvipikiri zvako zvesainzi kumba ~
Runhare: + 86-769-8122 6809
Runhare: +86 136 6298 7261
Katsi Maziso gel
Dzidzisa iwe kubvisa mapikiri ejeri kupora kubva muzvipikiri zvako nesainzi kumba ~
Ndichiri kurangarira ndichiona vanhu vazhinji vachinyunyuta nezvegore idzva pakutanga kweGore Idzva. Nekuda kweiyo Covid-19, ini ndaisatarisira kuti mushure megadziriro yemapyjama, iyo manicure uye vhudzi rakapendwa iro rakarongedzwa kwegore idzva zvese zvaive pasina.
Panguva iyoyo, Z akanyaradza munhu wese chero bedzi vaive mune zvakanaka mood, mari haina kutambiswa. Asi mushure memwedzi wapfuura, dambudziko nyowani rakamuka: zvipikiri zvakakura nechinenge chetatu, uye nzara dzinotadza kana dzikaramba dziri padziri, uye nzara salons hadzina kuvhurwa. Chii chandingaite kune chipikiri neakaitwa nzara gel kupolisha?
Vanhukadzi vanowanzo farira kugadzira mbambo dzembambo vanoziva kuti chipikiri chegelisi chakasiyana neyakajairika chipikiri. Paunoenda kuchitoro kuti ubvise, iwe unofanirwa kunyatso kupurisirwa neye manicurist kuti ubvise. Izvi zvinodaro nekuti pamusoro pechipikiri chine mucherechedzo, unova unoitisa nzara. Mudzidzisi anotopfekedza mativi ezvipikiri nechisimbiso kuti zvisarebesa.
Isu kazhinji hatina michina yehunyanzvi yejecha kumba, asi zvakajairika sanding bepa inowanikwawo. Inokurudzirwa kuti usarudze tambo yekukwiza ine simba rakasimba rekushushikana nechando. Iyo nguva yekupukuta inosiyana. Chiitiko chaZ ndechekuti chero bedzi iyo nzvimbo isina kupenya, inenge yakafanana.
Ko kana pasina pepa rematte pamba? Unogona kuona kuti akawanda maketera ezvipikiri ane awo polishing dura, asi iyo mhando yakatetepa, uye hapana yakakosha chipikiri kukwesha tsvimbo yekuita nyore kushanda
Wobva watanga iyo yakasarudzika nzara yekubvisa maitiro. Uv gel polish haina kufanana neyakajairwa chipikiri. Zvakanakisa kutenga nyanzvi yekubvisa zvipikiri kana chipikiri chishongedzo. Iye zvino hazvisi nyore kuenda kunotenga, fairies ingo zviite online.
Chipikiri chekubvisa chinogona kudirwa mumukombe mudiki, wobva wanyorovesa minwe yako kwemaminetsi gumi nemasere wozoitora; mashandiro ebhegi rembambo ari nyore, ingovhura uye putira zvigunwe gumi, kazhinji maminetsi gumi nemashanu.
Mushure me "rubhabhatidzo" rwekubvisa nzara, iyo polish inova yakapfava. Panguva ino, zvinyoronyoro pusha kumucheto uye ichawedzera kumusoro, uye wozoisundira zvishoma nezvishoma kusvika kumagumo nesimbi pusher, uye iyo chipikiri glue inobviswa zvinobudirira.
Kana paine zvisaririra, shandisa mutsetse wekukwiza kune jecha shoma. Chekupedzisira, usakanganwa kupukuta nekuisa mafuta emuviri. Iko kubwinya kwembambo ichangobva kubviswa isina kunaka haina kunaka uye zvishoma kusimba, uye ichapora zvishoma mumazuva mashoma.
Asi kutaura zvazviri, kupora nzara iwe pachako kuri nyore kukuvara, saka Z inonzwa kuti kana iwe ukaita imwe-ruvara kana kusvetuka-ruvara nzara (kwete iyo mhando ine akawanda akaomarara mapatani), ivo fairies vane zvipikiri polish kumba inogona zvakare kugadzira iwo mavara pachawo.
Tsvaga iyo nail polish kara nhamba iyo yakafanana neiyo mbara vara, uye wozora mashoma akati wandei kune iyo chikamu chakura, uye wozora imwe inopenya nzara kupora kune iyo yese nzara pamusoro. Mhedzisiro yacho inofanirwa kuve yakanaka.
Nekudaro, kunyange hazvo zviri pamusoro zviri nyore uye zviri nyore kutaura, iko kushanda kwacho kungasave kwakanakira sekuenda kuchipatara chembambo, saka pane imwe nzira yekugura nzara dzakura.
Lazy Cancer Z yakagadzira monochromatic tsvuku zvipikiri panguva yeChinese Nyowani Year. Ini ndinonzwa kuti ini ndichiri kuzviona mushure mekucheka chetatu. Ini ndinofunga handikwanise kubuda izvozvi, saka ndinokura ndocheka zvishoma nezvishoma. Zvinoita kunge zvisina basa?
Zvese mune zvese, kunyangwe ivo fairies pachavo vachivaturunura kana kuronga kuti vachengete seizvi, chenjera kuti usatora chipikiri glue! Pakutanga, kubviswa kwembambo kwesainzi hakukonzere kukuvadza kukuru pazvipikiri, asi kana ukazvimanikidza kuenda, zviri nyore kukuvadza mubhedha wezvipikiri kana kunyange kuzvimba.
Uye kana iri yakapfava manicure seZ ino, uye hazvina basa kana ukaichengeta kwenguva yakareba, zvichiri kukurudzirwa kuti fairies chengetedza tsika yakanaka yekucheka nguva dzose kudzivirira kuunganidzwa kwetsvina muzvipikiri, izvo zvisina kunaka muviri ~
Maindasitiri Nzvimbo, Xiaohe Musha, Daojiao, Dongguan, GD, China